Jinsiga iyo sinnaanta | zmekk
Ragga iyo dumarku waa kala duwan yihiin. Laakiin marka laga reebo kala duwaanashaha jir ahaaneed, waxa jira kala duwanaansho u dhexeeya ragga iyo dumarka oo ka imanaya qaabka la inoo barbaariyo.
Bulshada aan la noolanahay saamayn bay ku leedahay sida aan u aragno ragganimo iyo dumarnimo
Qoyska iyo asxaabtuna sidaas oo kale ayey saamayn ku leeyihiin. Kala duwanaantan waxaan ugu yeernaa doorka jinsiga ragga iyo dumarka. Badanka uma fiirsanno doorarkan maadaama aan baranay inaga oo aad u yar.
Tusaale doorka ragga iyo dumarka waxaa noqon kara wiilashu markay yar yihiin waxaa loogu lebbisaa dhar buluug ah waxayna ku ciyaaraan baabuur yaryar, halka gabdhaha loogu lebbiso dhar basali ah oo ayna ku ciyaaraan boombalooyin.
Tusaale kale waa qaabka wiilasha iyo gabdhuhu reerka u caawiyaan. Waxaa caadi ah in wiilashu ka caawiyaa waxayaabaha bannaanka lagu sameeyo, gabdhuhana guriga gudihiisa sida cunto karinta iyo nadaafadda. Sabab dhanka dabiicadda ah oo keenaysa ma jirto in wiilasha iyo gabdhuhu dhar midab kala duwan isticmaalaan ama shaqo kala duwan guriga ka sameeyaan. Sidaas oo ay tahay doorarka ragga iyo dumarku waxay keenayaan inaan wiilasha iyo gabdhaha si kala duwan ula dhaqanno.
Doorka ragga iyo dumarku waa kala duwan yahay waddamo badan. Waddamada qaarkood dumarka ayaa ka taliya oo qoyska ka mas’uula, meelaha qaarna ragga ayaa doorkan leh.
Doorka ragga iyo dumarku wuxuu noqon karaa wax aan fiicnayn haddii uu ka xanibayo wiilasha iyo gabdhuhu waxay rabaan
Noorweey iyo waddamo badan oo reer galbeedka ah doorka ragga iyo dumarku aad bay isugu dhow yihiin. Sababahana waxa ka mid ah halgankii sinnaanta ee toddobaatanaadkii, ee dumarku u halgameen in ay xuquuqda ragga oo kale helaan.
Sidaas darteed waa caadi in Noorweey ragga iyo dumarkuba shaqaystaan, oo ay hawsha gurigana ay qaybsadaan. Ragga iyo dumarkuba cuntadana way kariyaan, carruurtana way ilaaliyaan.
Noorwey waxaa ka jira sharciyo dhigaya in ragga iyo dumarka isku si loola dhaqmo. Ragga iyo dumarku waa isku xaquuq marka la eego dhanka waxbarashada, shaqada, hantida ma guuraanka ah, guurka iyo furriinka. Haddii qof ku takooro qof kale labnimo ama dhedignimo waa la ciqaabayaa.
Laakiin Noorweey dhinacyada qaar weli doorka ragga iyo dumarku isbeddel weyn ma samayn.Rag iyo dumar badan baa ilaa hadda doorta shaqooyinka iyo waxbarashada ragga ama dumarku u badan yihiin. Inkastoo farqigu aanu aad u badnayn, dumar badan baa ku takhasusa shaqooyinka caafimaadka iyo daryeelka la xiriira, rag badanna waxay doortaan farsamada iyo sayniska.
Welina ragga ayaa kaga badan dumarka madaxnimada.
Yuusuf wuxuu rabaa inu xanaanada macallin ka noqdo. Aabbihiise waxay la tahay inay shaqo dumar tahay. Aabbihii wuxuu rabaa inuu Yuusuf noqdo makaaniga baabuurta. Maxay kula tahay in Yuusuf sameeyo?
Maxaa u sababa in dumar iyo rag badani doortaan shaqooyinka dumarka ama raggu u badan yihiin?
Farqi bayoolaji – farqi lagu dhasho
Doorka jinsiga – wiilasha iyo gabdhaha waxaan ka filayno
Sinnaan – si isku mida ula dhaqan oo fursado isku mida sii
Caado – sida weligeed wax loo samayn jirey, berisamaad